Wasaaradda Caafimaadka oo la wareegaysa dhammaan isbitaallada dalka - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG) – Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, Marwo, Fowziya Abiikar Nuur, ayaa sheegtay inay Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya qorsheyneyso in la wareegaan dhammaan isbitaalada guud ee dalka ee ay dowladdii hore gacanta ku heyn jirtay.
Wasiirad Fowziya ayaa hadalka sheegtay mar ay kormeer li mareysay Isbitaalka Guud ee Keysaneey ee Magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta lagu dabiibo Haweenka uu ku chaco isku furanka ee loo yiqaan Fistula Department.
Wasiirka Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ammaan iyo mahadcelin u jeedisay howl-wadeennada Isbibaalka, iyada oo sheegtay inay dedaal ka geysan doonaan sidii loo tayayn lahaa xarunta.
“Wasaaradda caafimaadka waxaa ka go’an in Isbitaalladii guud ay si buuxda u maamusho Gacantana ugu qabato, kaalmo weynna ay u fidiso, marka waa wax noo wada yaalla, aad baanan ugu faraxsanahay inaan idinla kulmo”, ayay tiri Wasiir Marwo Fowziyo.
Dhanka kale wasiiradda caafimaadka ayaa sheegtay in ay qorsheynayaan sidii loo sameyn lahaa xarun isku furanka lagu daaweeyo sidoo kalene ka hortag iyo wacyi gelin ballaaran loogu sameyn lahaa si loo yareeyo Khatarta naf ahaaneed ee ka iman karta xanuunkan.
Dhismaha isbitaalka Keysaney ayaa waagii dowladda ahaan jiray xabsi dowladdii dhexe Soomaaliya balse dhaqaatiir isu tagay ayaa burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib dhismaha xabsiga u badalay isbitaal guud waxaana 25-kii sano ee lasoo dhaafay hay’adda bisha cas Soomaaliya.
G. Doorashada oo shaaciyey in la buuxin doono kursigii uu banneeyey Xildhibaan Dhahar Cali